Honda gam akporo Car Dvd, Honda Android 4.2 Car Dvd, Honda gam akporo 5.1 Car Dvd China na-eduga ulo oru
Nkọwa:Honda gam akporo Car Dvd,Honda gam akporo 6.0 Car Dvd,Honda gam akporo 5.1 Car Dvd,Honda gam akporo 4.4 Car Dvd,,
Home > Ngwaahịa > Honda gam akporo Car Dvd
Ngwaahịa nke Honda gam akporo Car Dvd , anyị bụ ndị na-emepụta ọkachamara si China, Honda gam akporo Car Dvd , Honda gam akporo 6.0 Car Dvd suppliers / factory, wholesale high-quality products of Honda gam akporo 5.1 Car Dvd R & D and manufacturing, anyị nwere ọrụ zuru ezu mgbe-ahịa na nkwado teknụzụ. Le anya n'ihu na nkwado gị!
Ọgbọ egwuregwu Civic 2016 stereo dvd  Kpọtụrụ ugbu a
CRV 2017 ụgbọ ala mgbasa ozi gam akporo  Kpọtụrụ ugbu a
Onye ọkpụkpọ ụgbọ ala stereo dvd nke 2006-2013  Kpọtụrụ ugbu a
Accord 9 2017 ụgbọ oloko dvd stereo dvd  Kpọtụrụ ugbu a
FIT 2014-2015 ụgbọ ala multimedia android 9.0  Kpọtụrụ ugbu a
CRV 2012-2015 ụgbọ ala dvd ọkpụkpọ aka ihu  Kpọtụrụ ugbu a
Playergbọ ihe egwu CVIC 2012 stereo dvd  Kpọtụrụ ugbu a
CRV 2006-2011 android 9.0 audio audio  Kpọtụrụ ugbu a
Accord 7 2003-2007 multimedia android 9.0  Kpọtụrụ ugbu a
Accord 8 2008-2011 android 9.0 audio audio  Kpọtụrụ ugbu a
Civic 2006-2011 2din audio audio  Kpọtụrụ ugbu a
Ire ere octa isi akwara dvd 2016 Civic  Kpọtụrụ ugbu a
2G Ram 64G flash car radio Accord 7  Kpọtụrụ ugbu a
CRV 2009 gam akporo 9.0 Isi Unit Touchscreen  Kpọtụrụ ugbu a
Eletrọnsị ụgbọ ala Klyde android maka CITY 2006-2013  Kpọtụrụ ugbu a
Klyde gam akporo Autoradio maka CITY 2006-2013  Kpọtụrụ ugbu a
Klyde Android bilstereo ịnyagharịa maka CIVIC 2012  Kpọtụrụ ugbu a
Multimedia bilstereo nke Android maka Honda Fit 2014-2015  Kpọtụrụ ugbu a
Android 9 Bilstereo Multimedia maka CIVIC 2016  Kpọtụrụ ugbu a
sistemụ igwe eji arụ ọrụ gam akporo maka CRV 2017  Kpọtụrụ ugbu a
ihuenyo mmetụ ihu igwe dvd maka Accord 7  Kpọtụrụ ugbu a
Ọgbọ egwuregwu Civic 2016 stereo dvd
Ọgbọ egwuregwu Civic 2016 stereo dvd 1, Naviggagharị 3D: Sitena ụgbọ ala nwere ọrụ igodo ọgbara ụwa zuru oke nke eziokwu zuru oke. Igwe eji egwu siterio dvd Civic 2016 Site na ọnọdụ dị ugbu a, ọsọ, ihe dịpụrụ adịpụ, ngosipụta ala ụlọ, ngosi 3D...
CRV 2017 ụgbọ ala mgbasa ozi gam akporo
CRV 2017 ụgbọ ala mgbasa ozi gam akporo 1, Naviggagharị 3D: Sitena ụgbọ ala nwere ọrụ igodo ọgbara ụwa zuru oke nke eziokwu zuru oke. CRV 2017 car multimedia system android Na ọnọdụ dị ugbu a, ọsọ, ihe dịpụrụ adịpụ, ngosipụta ụlọ amaala, 3D...
Onye ọkpụkpọ ụgbọ ala stereo dvd nke 2006-2013
Onye ọkpụkpọ ụgbọ ala stereo dvd nke 2006-2013 1. Igwefoto stereo dvd a obodo 2006-2013 mejupụtara kọmputa kọmputa na-anagide ụgbọ ala na-egosipụta ọnụ ụzọ abụọ. Antenna GPS wuru na-anata satellites iri abụọ na anọ si gburugburu ụwa dịkarịa ala 3...
Accord 9 2017 ụgbọ oloko dvd stereo dvd
Accord 9 2017 ụgbọ oloko dvd stereo dvd 1.Akwadoro ya na njikwa wiilị: sọọsọ egwu nke na-esote, dozie olu ma ọ bụ gbanye ọwa ọzọ, na-enweghị iwepụ aka gị, na -eme ka njem gị bụrụ nke na-atọ ụtọ ma nwekwuo ọ enjoyableụ na DVD ụgbọ ala a maka Accord 9...
FIT 2014-2015 ụgbọ ala multimedia android 9.0
FIT 2014-2015 ụgbọ ala multimedia android 9.0 1. Ihe atụ nke FIT 2014-2015 multimedia android 9.0 kwụsiri ike ugbu a. Anyị na-anabata ọrụ OEM. Nwere ike iji atụmatụ nke gị maka akara, nkwakọ ngwaahịa na UI. Ike nrụpụta anyị maka FIT 2014-2015...
CRV 2012-2015 ụgbọ ala dvd ọkpụkpọ aka ihu
CRV 2012-2015 ụgbọ ala dvd ọkpụkpọ aka ihu 1. Ihe atụ nke CRV 2012-2015 ụgbọ ala DVD dvd ọkpụkpọ aka ihu na-akwụsi ike ugbu a. Anyị na-anabata ọrụ OEM. Nwere ike iji atụmatụ nke gị maka akara, nkwakọ ngwaahịa na UI. Ike nrụpụta anyị maka ihu igwe...
Playergbọ ihe egwu CVIC 2012 stereo dvd
Playergbọ ihe egwu CVIC 2012 stereo dvd 1. Ihe nlere maka CIVIC 2012 stereo dvd player a kwụsiri ike ugbu a. Anyị na-anabata ọrụ OEM. Nwere ike iji atụmatụ nke gị maka akara, nkwakọ ngwaahịa na UI. Ike nrụpụta anyị maka dvd ụgbọ ala maka igwe egwu...
CRV 2006-2011 android 9.0 audio audio 1. CRV 2006-2011 gam akporo 9.0 ụda ọdịnala - ekwentị siri ike ahaziri iche: 7 dị iche iche dị n'ọnọdụ dị. Ahịa nwekwara ike iji foto ha dị ka ndabere. 2. Igwe ntị ụgbọ ala CRV 2006-2011 gam akporo 9.0...
Accord 7 2003-2007 multimedia android 9.0
Accord 7 2003-2007 multimedia android 9.0 1. Accord 7 2003-2007 car mult android android 9.0: Kwado atụmatụ ejikọtara dị mfe: Dakọtara na ekwentị ndị android na ngwaọrụ, njirimara dị mfe na-enyere njikwa n'etiti gị na ekwentị ụgbọ ala isi. Nwere...
Accord 8 2008-2011 android 9.0 audio audio 1. Nke a Accord 8 2008-2011 android 9.0 audio audio na-akwado ọrụ gps navigation. Igwefoto DVD dvd a maka ya di elu, anyi n’enye onwa iri na abuo 2. Mkpebi ihuenyo bụ HD 1024 * 600, igwe egwuregwu igwe ihe...
Civic 2006-2011 2din audio audio
Civic 2006-2011 2din audio audio 1. Nke a bụ ihuenyo mmetụaka dị ukwuu, HD Screen Civic 2006-2011 2din audio audio of Ọnọdụ mmetụta uche nke redio dị elu, ga-enweta ụda, okpokoro ahụ apụtaghị, mana ọ bụrụ na uche ahụ dị ala, ọ nwere ike kpachara...
Ire ere octa isi akwara dvd 2016 Civic
Ire ere octa isi akwara dvd 2016 Civic 1. Ntinye vidiyo na vidiyo na ntanetị, na nyocha nlegharị anya n'azụ vidiyo na enyo ma usoro ọdịyo Digital audio. Amplifier Max Mmepụta Ike / Ọwa Qty: 52 watts x 4. ntinye igwefoto n'azu azu. wuru na...
2G Ram 64G flash car radio Accord 7
2G Ram 64G flash car radio Accord 7 1. Nkọwapụta - OS: Android 9.0 - CPU: Octa-core; GPU: - 32GB Flash ebe nchekwa maka nbudata ọtụtụ APPs dakọtara na ọhụụ Ihuenyo Ihuenyo: 6.2-Inch Digital Screen Kpoo ihuenyo mmetuaka (5 isi) Mgbapụta bọtịnụ ndị...
CRV 2009 gam akporo 9.0 Isi Unit Touchscreen
CRV 2009 gam akporo 9.0 Isi Unit Touchscreen Ndi otu a bu CRV 2009 gam akporo 9.0 Isi jiri sistemu arụmọrụ Android 9.0 kachasị ọhụrụ, ebe nchekwa 4 + 32G, Octa-core CPU, RDS redio nwere ahaziri elu. 4 * 50w akwa ike amplifiers na muti-idozi nke EQ...
Eletrọnsị ụgbọ ala Klyde android maka CITY 2006-2013
Eletrọnsị ụgbọ ala Klyde android maka CITY 2006-2013 Dị ka otu n'ime ndị na-eme Android Car DVD emeputa na China, Klyde nwere ezigbo aha n'ọtụtụ mba, dị ka Russia, Turkey, GCC mba wdg. Ebe anyị na-akwado ahịa anyị ọkụ Klyde gam akporo...
Klyde gam akporo Autoradio maka CITY 2006-2013
Klyde gam akporo Autoradio maka CITY 2006-2013 Dị ka otu n'ime ndị na-eme Android Car DVD emeputa na China, Klyde nwere ezigbo aha n'ọtụtụ mba, dị ka Russia, Turkey, GCC mba wdg. Lee anyị na-akwado ahịa anyị na-ekpo ọkụ gam akporo Autoradio...
Klyde Android bilstereo ịnyagharịa maka CIVIC 2012
Klyde Android bilstereo ịnyagharịa maka CIVIC 2012 Lee na-atụ aro ịnyagharị Bilstereo gam akporo maka CIVIC 2012, ọ bụ ihe a ma ama n'etiti ndị ahịa anyị, jiri sistemụ gam akporo Android 9 kacha ọhụrụ. Ndakọrịta Fit 100% na ugbo ala ndị a: Honda...
Multimedia bilstereo nke Android maka Honda Fit 2014-2015
Multimedia bilstereo nke Android maka Honda Fit 2014-2015 Ebe a na-akwado bilstereo gam akporo Multimedia maka Honda Fit, ọ bụ ihe a ma ama n'etiti ndị ahịa anyị, jiri sistemụ Android 9 kacha ọhụrụ. Anyị nwere nhọrọ blọgụ nke parrot na Android...
Android 9 Bilstereo Multimedia maka CIVIC 2016
Android 9 Bilstereo Multimedia maka CIVIC 2016 N'ebe a, ịkwado Bilstereo Multimedia maka CIVIC, ọ bụ ihe a ma ama n'etiti ndị ahịa anyị, yana sistemụ Android 9 ọhụụ. Ndakọrịta Fit 100% na ugbo ala ndị a: Honda CIVIC 2016 Kwado Nchịkwa Ndị...
sistemụ igwe eji arụ ọrụ gam akporo maka CRV 2017
sistemụ igwe eji arụ ọrụ gam akporo maka CRV 2017 N’ebe a ka ị na-akwado usoro igwe eletriki ụgbọ ala maka CRV, ọ bụ ihe ewu ewu n’etiti ndị ahịa anyị, jiri sistemụ Android 9 kacha ọhụrụ. Ndakọrịta Fit 100% na ugbo ala ndị a: Honda CRV 2017 Kwado...
ihuenyo mmetụ ihu igwe dvd maka Accord 7
ihuenyo mmetụ ihu igwe dvd maka Accord 7 Lee nkwanye ụgbọ ala DVD dvd maka Accord 7, ọ bụ ihe a ma ama n'etiti ndị ahịa anyị, yana sistemụ Android 9 ọhụụ. Ndakọrịta Fit 100% na ugbo ala ndị a: Honda Accord 7 2003-2007 Kwado Nchịkwa Ndị Ugboelu...
China Honda gam akporo Car Dvd Ngwa
1.Honda gam akporo Car Dvd, Android 6.0 sistemụ: Site na njikwa ebe nchekwa kachasị mma na ike ihuenyo mmetụ nke gam akporo 6.0. Emeela ka usoro ihe eji arụ ọrụ rute ngwa ngwa na ọkwa zuru oke.
2.Honda gam akporo Car Dvd, Bulit-in WIFI hotspots: intanetị dị mfe na nke enweghị nke ị ga - eme ka ị chọọ ịntanetị, lelee vidio dị n'ịntanetị, lelee akwụkwọ ozi gị, kpọọ egwuregwu, ibudata ngwa, ma ọ bụ ọbụna iji maapụ dị n'ịntanetị n'efu. Ọrụ DVR (jikọọ igwefoto USB ozugbo) / arụ ọrụ ụzọ enyo enyo ọrụ / Jikọọ OBD mpụga (nhọrọ) / Jikọọ modem 3G mpụga (nhọrọ).
3.Honda gam akporo Car Dvd, nwere ike dabara ụgbọ ala Honda dị iche iche.
CRZ / HRV 2015 / VEZEL 2015 / CITY 2014 Left / CITY 2014 Right / 2014 FIT Left / 2014 FIT right / Civic Saloon 2014 / Civic 2014 / Civic 2012 / CIVIC (n'aka nri) 2006-2011 / CIVIC (aka ekpe) 2006-2011 / CRV 2012 / CRV 2006-2011 / Ọhụrụ FIT 2009-2011 / CITY 1.5L 2008-2012 / Ọgbakọ 2008-2011
Honda gam akporo Car Dvd Honda gam akporo 6.0 Car Dvd Honda gam akporo 5.1 Car Dvd Honda gam akporo 4.4 Car Dvd Honda gam akporo Systems Car Dvd